Handia làlana volamena /
ILAY ZAZALAHIKELY NANDRESY MPANJAKA
Nisy hono mpanjaka lehibe atao hoe Xavier I, niezaka namory ny fanjakany ho iray. Tsy maintsy amin'ny alalan'ny ady
anefa no nandresena lahatra ny mpajaka madinika rehetra hanaiky ny fanjakana iray izay tarihin'i Xavier I.
Efa intelo no notafihin'ny miaramilany ity fanjakana kely iray nisy mpanjaka atao hoe Honoré maozatra, fa resy hatrany
ny miaramilan'ny mpanjaka lehibe. Very hevitra i Xavier ka saiky namoy fo. Nisy tovolahy kely anefa atao hoe Christian,
nanolo-tena hiady amin'i Honoré maozatra sy ny miaramilany ka tonga tao amin'ny mpanjaka:
- Trarantitra ianao ry mpanajaka, aleo aho andeha hiady amin'i Honoré fa ho resiko izy ary atolotro anao!
- Inona tsara hoe lehity, hoy ny mpanjaka nitrerona, miaramilako rehetra ary no nalefa tany, resy, firy ny maty, firy nynaratra, aza miadaladala!
- Tsia ry mpanjaka, raha tsy resiko izy, dia tapao ny lohako fa tsy maninona!
- Hay mandehana ary, dia tandremo an, izaho tsy misangy..
Dia lasa tokoa i Christian, nandeha tongotra andro vitsivitsy vao tonga tany amin'ilay renivohitry ny fanjakana nisy ny mpanjaka Honoré.
Fa raha vao niala tany an-tananany izy, dia nanao akanjo mitovy amin'ny vahoaka ao amin'ny firenen'i Honoré.
Rehefa hiditra ny vavahady tao an-tanàna izy, tsy nisy nahalala hoe vahiny, na dia ny miaramila aza, ary dia tafatsofoka mora foana tao an-tanàna izy ary afaka nifanerasera tamin'ny olona atao. Rehefa afaka ando vitsivitsy, tonga ny filazàna fa marary ny mpanjaka Honoré. Natao ny fitsaboana rehetra, ny ala-nenina fa tsy sitrana. Dia natao ny antso avo fa na iza na iza mahasitrana ny mpanjaka, dia omena valisoa be. Rehefa ren'i Christian izany dia nangataka tamin'ny miaramila izy mba ho entina any amin'ny mpanjaka, hanasitrana azy amin'ny aretiny. I Christiana hono mantsy dia manana fahaizana manasitrana aretina, fa raha misy olona marary hono, kasihiny fotsiny dia sitrana.
Rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka Honoré izy, dia tezitra ny mpanjaka:
- - Haninona aty ty zazakely tsisy dikany ity? Mahasosotra ahy na dia mijery azy aza! Asaovy mivoaka any!
- Azafady ry mpanjaka, izy io milaza fa afaka manasitrana anao hono, ka dia nentinay aty, hoy ny miaramila.
- Marina ve izany, sao dia mamazivazy ahy ialahy,fa tapa-doha an! hoy ny mpanjaka!
- Mahay manasitrana tokoa aho ry mpanjaka, saingy izao no fepetra, raha vonona hianao hanaiky ny
mpanjaka lehibe Xavier, ary hanaiky fa izy irery ihany no mpanjaka, dia hanasitrana anao aho!
- Zao leitsy a! efa be dia be no nilaza fa mahay manasitrana, nitsabo ahy, nefa izao mbola marary eto
am-pandriana ihany, ka raha hain'ialahy ny manasitrana ahy, dia ekeko ny zavatra nolazain'ialahy.
Izy irery ihany no ho mpanjaka ary izaho eo ambany fahefany raha sitrana soa aman-tsara.
-Eny ary, hoy Christian, sady nokasihiny kely tamin'ny tanany ny mpanjaka, ary dia sitrana niaraka
tamin'izay ary tafatsangana avy hatrany teo am-pandriana.
Fa rehefa nitsangana izy, tahaka ny olona tsy nanino-tsy naninona, dia sady notondroiny i Christian no nibaiko ny miaramila izy hoe: "Sambory ilehio"!
Saingy, iny tanany nanondro an'i Christian iny, dia tsy nety niketraka fa nihinjitra foana teo.
Nantsoina ny miaramila hamerina ny tanany amin'ny laoniny fa e e! Farany, nifona tamin'i Christian ny mpanjaka, ka niangavy sy nitaraina hoe:
"Zao leitsy mifona amin'ialahay aho, sitrano ny tanako fa tsy hivadika intsony aho, fa hanompo ny
mpanjaka lehibe amin'izay aho! Hoy Christian, namaly hentitra ny mpanjaka: "
Tsy matoky anao intsony aho ry mpanjaka, satria mpivadibadika ianao! Izaho tsy hanasitrana anao raha tsy manaiky ianao ho any amin'ny mpanjaka Xavier. Ary rehefa tonga any ianao, izay aho vao hanasitrana anao.
Eny ary leitsy an! Ndao andeha, hoy ny mpanjaka, efa maika ny ho sitrana. Dia i Christian no mitari-dalana, ny mpanjaka sy ny miaramilany avy ao aoriana. Ny tanan'ny mpanjaka mihinjitra
tsy afaka miforitra.
Rehefa tonga teo akaikin'ny tanàna, noheverin'nymiaramila mpiambina an'i Xavier fa fahavalo hitifitra ny mpanjaka, amin'ilay tanana mihinjitra tahaka ny basy,
fa niantsoantso i Christian hoe: "Aza mitifitra fa izahoChristian ihany ity, tongako aty ny mpanjaka Honoré, fa efa manaiky, fa aza mitifitra!
Farany, tonga soa aman-tsara tao amin'ny lapan'i Xavier izy sy ny mpanjaka Honoré.
Nanontanian'i Christian farany teo anatrehan'ny mpanjaka lehibe i Honoré: "Tena vonona ve ianaohanaiky ny mpanjaka lehibe, ka tsy hikomy intsony?"?
"Vonona aho leroa, vonona aho ry mpanjaka Xavier o! Tsy hikomy intsony aho, ianao irery ihanyno mpanjaka amin'izao sisa izao!"
"Eny ary, sady nokasihiny ny tanan'ny mpanjaka Honoré ary dia niverina tamin'ny laoniny toy ny an'ny olona rehetra, ary dia niankohoka teo amin'ny mpanjaka lehibe sy Christian izy, ary tsy nikomy tamin'ny mpanjaka Xavier intsony!
"Mahery ialahy ry Christian a, ialahy no asandratroho Praiministra manomboka anio",
hoy ny mpanjaka Xavier. Dia nalaina ny akanjo tsara indrindra nomena azy ary tonga sambatra sy tretrika "ILAY ZAZALAHY NANDRESY MPANJAKA".
1. Randriamalala Josoa | 03/03/2011
Misaotra indrindra tompoko fa mahafinaritra ahy ny tantara toy itony. Mora handraisana lesona indrindra eo amin'ny fampitana ny tenin'Andriamanitra.Koa raha azo atao mba omeo ny tenin'Andriamanitra mety mifanaraka amin'io (toko sy andininy)ho entina mampahery ny olona.
Manantena ihany koa fa mbola hisy hatrany ny tantara toy izao.
Dia mametraka ny fisaorana ary mirary soa ho indrindra, ny Tompo anie homba sy hanolontsaina antsika mandrakariva.